पार्टी एकता सकियो, अव के गर्दैछ सत्तारुढ नेकपा ? — Motivatenews.Com
पार्टी एकता सकियो, अव के गर्दैछ सत्तारुढ नेकपा ?
काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक बर्ष भित्र पार्टी एकताको काम लगभग सकाएको छ । पोलिटब्युरो गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको काम बाँकी रहे पनि नेकपाले अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन नयाँ योजना बनाउन थालेको छ ।
नेताहरूका अनुसार अब नेकपाले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा तल्ला कमिटीका अधिवेशन, जनवर्गीय सङ्गठनका अधिवेशन र पार्टी सदस्यलाई सङ्गठितदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन लक्षित कार्ययोजना बनाएको छ । यसबाहेक पार्टी कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर जनसम्बन्ध विस्तारका लागि अभियान सुरु गर्ने नेकपाको योजना छ ।
वडादेखि जिल्लासम्म र प्रदेशदेखि जनसङ्गठनसम्मको एकतालाई पूर्णता दिएसँगै ती सङ्गठनमा रहेका नेता कार्यकर्ताले सङ्गठन र जनतासँग जोड्ने गरी परिचालन हुने योजना खोजेका छन् । उनीहरूको अपेक्षा र पार्टी एकता हुँदाको मार्गचित्रअनुसार केन्द्रीय नेतृत्वले योजना बनाउने छ । गत पुसमा सकिएको स्थायी समितिको बैठकमा पारित राजनीति प्रतिवेदनको जगमा आगामी कार्यक्रम तय गर्ने नेताहरूको योजना छ ।
त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा जारी विज्ञप्तीमा पनि नेकपाले जनपरिचालनको विषय उठाएको थियो । विज्ञप्तीमा थियो, ‘सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति र आम जनसमुदायलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा परिचालित गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’
नेकपाको अन्तरिम विधानमा नेकपाको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा तोकेको छ । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेकपाले आगामी महाधिवेशनलाई ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन’ को नाम दिएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य दस्तावेजहरू पारित गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन पनि महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार हुने भएको छ ।
नेकपाको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माण तथा सबै तहका कमिटी र सदस्यको सञ्चालन जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा हुने भनिएको छ । महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा किटान गरेको नेकपाले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी तथा केन्द्रीकृत नेतृत्व र विकेन्द्रित एवम् शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ ।
२०७६ जेठ ५ गते प्रकाशित